Freshchat: Otu, Multilingual, Chat Integrated Na Chatbot Maka Saịtị Gị | Martech Zone
Ma ị na-anya ụgbọ ala na-eduga na saịtị gị, na-azụ ahịa, ma ọ bụ na-enye nkwado ndị ahịa… nwere atụmanya n'oge a na weebụsaịtị ọ bụla nwere ike ịkparịta ụka. Ezie na nke na ada ụda, e nwere ọtụtụ ihe mgbagwoju anya na nkata… si manning na nkata, na-anagide spam, akpaaka-aza, routing… ọ pụrụ ịbụ nnọọ isi ọwụwa.
Ọtụtụ nkata nyiwe dị mfe… naanị ọsọ agba anọ n'etiti ndị na-akwado gị na ndị ọbịa na saịtị gị. Nke ahụ na-ahapụ nnukwu oghere na ohere na ahụmịhe ndị ahịa gị yana azụmahịa gị 'ike soro ma nyere ndị ọbịa aka. Freshchat bụ ihe siri ike, nkata nkata ụwa na-enye ọtụtụ atụmatụ na njikọta.
Freshchat: Ngwọta Izi ozi maka ọkwa ọ bụla nke Njem Ndị Ahịa
Na-eme ka ihe mgbanwe dị na njedebe, njedebe ruo na njedebe, AI nke a na-akwado iji mee ka ahụmịhe ndị ahịa dị n'otu, na-eme ka ọrụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ma na-enye ike gburugburu ebe obibi nke ndị mmepe na ndị mmekọ. Nyochaa ike nke Freshworks platform.
Ebu ndi ndu - soro ndị ọbịa mee tupu ha apụ na saịtị gị site na iji bọọ na mkpọsa. Belata ọnụego ibiaghachi ma zụlite ndị ọbịa na ebumnuche dị ala ịzụta.
ahịa nkwado - kwado ma jigide ndị ahịa, na-eweta afọ ojuju n'ọtụtụ. Na-akpalite azịza akpaaka, na-akparịta ụka, ma na-aza nzaghachi ndị otu nkwado gị.
Njikọ ndị ahịa - mepee uto site n'ịtụgharị ndị ọbịa ka ha bụrụ ndị ahịa na-arụ ọrụ. Kwupụta onyinye ma ọ bụ ozi ahaziri iche dabere na mmemme.
Atụmatụ Freshchat Gụnyere
Ihe Mgbasa Ozi - Tụọ. Melite. Tinyegharịa Nweta echiche nke metrik dịka anya, zitere, na ọnụego azịza.
Owa - Na mgbakwunye na weebụsaịtị gị, Freshchat bụ ikpo okwu jikọrọ ọnụ nke nwere ike iwekọta yana akaụntụ azụmaahịa gị na Slack, WhatsApp, Apple Business Chat, Line, Facebook Messenger na Mobile Apps.
Nkata - Nwee ikike zuru oke n'ihe ị ga-ajụ na otu esi ajụ site na arụmụka bot arụ ọrụ. Kwe ka ndị bots nyefee onye ọbịa ahụ na otu gị mgbe ndị ọbịa gosipụtara njirimara na-adịghị mma nke chọrọ mmetụ mmadụ.
Njikọ Clearbit - Dochie iche-iche na ClearBit mwekota. Hazie ozi dabere na ụlọ ọrụ onye ọbịa gị, ụlọ ọrụ ya na ọrụ ya na profaịlụ mmekọrịta.
Nchịkọta - Bụrụ n'otu ndị ọrụ dịka ndị ọrụ gị - Duzie ha nke ọma site na ịnweta ihuenyo ha na ịgwa ha okwu.
Omenala ezubere iche - Zube ndị ọbịa dabere na ọnọdụ ndabara ma ọ bụ gaa n'ihu ma mepụta nke gị.
email Ịma Ọkwa - Soro ọbụlagodi mgbe ụzọ ahụ kwụsịrị na weebụsaịtị gị yana ọkwa email.
Enterprise - ngwa ahia izipu ozi iji bulie nkwado gi ka ikwere itinye aka nke ndi ahia n’enweghi nsogbu.
Ihe omume usoro iheomume - Nweta akụkọ ihe mere eme nke njem esenowo gị na saịtị gị n'ofe ọnwa, ụbọchị na oge nke ụbọchị.
Nghọta nke Helpdesk - Nweta nghọta niile ị chọrọ iji nyefee afọ ojuju ndị ahịa site na dashboard oge, helpdesk na ndị otu na-akọ akụkọ.
Na-Ozi Ajụjụ - Kwe ka ndị ọbịa chọta ihe ngwọta sitere na Web Messenger site na iji ogwe ọchụchọ iji chọọ Ajụjụ. Nnyocha siri ike na-eme ka ndị ọrụ ghara ịgabiga ọtụtụ ọdịnaya iji nweta azịza.
IntelliAssign - Route mkparịta ụka dabere na nkà etoju nke gị otu - mbido, márá, ma ọ bụ ọkachamara. Ma ọ bụ na-aga ma nye ndị ọrụ ozi ozi dabere na iwu akọwapụtara, nzacha, na isiokwu.
Multilingual Onye Ozi - Okwu ziri ezi na - eme ma ọ bụ na - agbaji egwuregwu. Hazie ihe onye ozi gị kwuru ma họrọ site na asụsụ iri atọ na atọ
OmniChat - Mee ọgbọ ọgbọ ka ọ nọ ebe niile na mgbatị chrome.
Igbe mbata mbu - Nọrọ n’elu mkparịta ụka nke kachasị mkpa. Ozi nzacha dabere na oge nzaghachi.
Ọgaranya Media - Tinyere nzaghachi ederede, ị nwere ike itinye vidiyo, onyonyo, emojis, akwụkwọ mmado, ma ọ bụ PDF na dọkụmentị na nzaghachi akpaaka gị na nke aka gị.
SmartPlugs - Wepụ data sitere na ngwa ndị dị na mpụga dị ka CRM gị ma ọ bụ ngwa ọrụ akpaaka ahịa gị ma ọ bụ tinye data na ngwa ndị a maka agbakwunye agbakwunye na ndu. Mmekọrịta gụnyere ngwa ọrụ, CRM, nyiwe & ịre ahịa nyiwe, vidiyo, telephony, E-azụmahịa, nsuso mbipụta, azụmaahịa azụmaahịa, sistemụ ịkwụ ụgwọ, ọnụego, na usoro ịgba ụgwọ.
Nhọrọ Nhọrọ - Trkpalite ihe karịrị otu ugboro iji mesie ike ma ọ bụ naanị otu ugboro ịbụ ndị na-abụghị spammy. Nwekwara ike ịhọrọ ịghara ịkpalite n'azụmahịa azụmahịa nke otu gị na / mgbe ndị otu gị nọ n'etiti mkparịta ụka gị na onye ọbịa.
Njegharị Ngwaahịa Freshchat Banye na Free
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ Freshchat.
Tags: apụl azụmahịa nkatabotnke ọmaikorinkatacognassistmwekota crmonye ozi facebookohuruFreshdeskonye na -ere ahịa ọhụrụIsi mmalitemaramaxmultilingual nkatanimble crmMgbakwunye omnistarnriNa-agba ọsọpipelinedeals crmsdkakụkọXpressstraipuachapubot weebụmkpokọta nkatawhatsappZoho